टेक्सास होल्डम ओड्स - UK 2021 ✅
Home » क्यासिनो खेलहरू » टेक्सास होल्डम » टेक्सास होल्डम ओड्स
२० टेक्सास होल्डम ओड्स
त्यसोभए पोकरको खेलमा तपाईं जित्न चाहनुहुन्छ? यदि हो, त्यसो भए तपाईलाई नहुनु पर्ने कुराको बारेमा थाहा पाउनु पर्छ। तल सूचीबद्ध केहि पोकर हरू र जानकारीहरू छन् जुन तपाईं पोकर टेबलमा अर्को पटक खेल्दा तपाईंको संभावनाहरू बढाउन मद्दत गर्दछ।
प्रिमियम हातको साथ सुरू गर्दै
के तपाईंलाई थाहा छ कि तपाईंसँग सुरु हुने हात स collecting्कलन गर्ने २.१% मौका छ, तस्वीर जोडी, डबल एसेस वा एके उपयुक्त छ? यदि तपाईं यी प्राप्त गर्न व्यवस्थित गर्नुभयो भने, यसलाई राख्नुहोस् र बलियो खेल गर्नुहोस्।
फ्ल्यासको लागि जाँदै
यदि तपाईं पूर्ण फ्लश (फ्लश ड्र) को मात्र एक कार्ड छोटो हुनुहुन्छ भने, यसले तपाईंलाई आफ्नो हात बनाउने 34 34..97% दिन्छ।
उपयुक्त कार्डहरूको साथ सावधान रहनुहोस्
त्यसोभए तपाईसँग दुई उपयुक्त कार्डहरू छन्। स्वचालित रूपमा जोडी खेल नगर्नुहोस् किनकि यसले केवल तपाईंको हातलाई २.%% ले बढवा दिन्छ।
जोडीहरू फेला पार्नुहोस्
तपाईसँग .4२..43% मौका छ तपाईको प्वालमा हलो कार्डका लागि जोडी फेला पार्ने।
यदि तपाईंले एक जोडी स have्कलन गर्नु भएको छ भने, तीन प्रकारको प्रकारको हिट गर्ने मौका .5..5 / १ हो। त्यसोभए तपाईंले आफ्ना साना जोडीहरूलाई सही तरीकाले खेल्नुपर्दछ, र यदि मूल्य ठीक छ भने।
यो चित्र कोर्नका लागि सिफारिस गरिएको कारण होईन, नदीको साथ र छिट्टै आउने आशा गरिन्छ।
यदि दुई जोडाहरू जीतको लागि जाँदैछन् भने, ठूलो जोडीसँग यसको making०% मौका छ। यदि तपाइँको हातले रानीहरू फिचर गर्दछ र याद गर्नुहोला कि शर्त उठाइएको छ र पुन: उठाएको छ, त्यहाँ ठूलो सम्भावना छ कि अर्को खेलाडीमा राजा, एसेस वा दुबै छन्। यो एक संकेत हो जुन अहिलेको समय फल्छ।
उत्तम कार्डहरू स .्कलन गर्दै
तपाईंसँग उत्तम कार्डहरू स collecting्कलन गर्ने धेरै स्लिम मौका छ। यदि तपाईको हातले मोड र नदीमा दुई सटीक कार्डहरू आवश्यक छन् भने, तपाइँलाई मात्र ०.०3% मौका दिइन्छ। यदि तपाईंसँग एउटा छ भने, अर्को स collecting्कलन गर्ने मौका मात्र 55.5555% छ।
बोर्ड हिट गर्दै
नदीको छेउमा आधा बढेर जोडी संकलन गर्ने तपाईंको सम्भावना बढ्न सक्नुहुन्छ।
यदि तपाईं पोकरको खेलमा खुला-अन्त सीधा ड्रप फ्लप गर्न प्रबन्ध गर्नुहुन्छ भने, यसले आठ सम्भावित कार्डहरू प्रदान गर्दछ जुन हातबाट गोल गर्न सकिन्छ। यसको मतलव तपाईले आफ्नो हात the१..5% प्रत्येक चोटि नदीमा हिर्काउनुहुनेछ। हामी सुझाव दिन्छौं कि तपाईं अर्को कार्ड हेर्नको लागि तपाईं भाँडो हातहरू प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ।
एक जोडी र दुई ओभरकार्ड बीचको एक शोडाउनलाई दौड वा सिक्का-फ्लिप भनेर चिनिन्छ किनकि हरेक संयोजनमा हरेक पटक जित्ने 50०% मौका हुन्छ। अब, यदि प्लेयरको overcards उपयुक्त छ, जोडी एक 46% देखि 54% मौका हुनेछ, तर यदि छैन, जीत को संभावना एक निशान 48 48% देखि 57% अधिकांश समय मा सार्दछ।
यदि तपाइँको हातको शीर्ष कार्ड अन्य खेलाडीसँग मिल्दछ, तर तपाइँसँग सानो किकर छ, तब तपाइँलाई केवल २%% जित्ने मौका दिइन्छ। उदाहरण को लागी, यदि तपाईं संग एक रानी छ कि एक राजा वा ऐस विरुद्ध जान्छ, तब तपाइँको मौका4मा लगभग2हो।
अधिकांश खेलाडीहरू मध्य-उपयुक्त कनेक्टरहरू एक्सेसको तुलनामा राम्रोको रूपमा रुचाउँदछन् किनकि यसले तपाईंलाई सीधा र फ्ल्यास स collecting्कलनको बढी सम्भावना दिन सक्छ। तर यदि तपाईं एक्सेस समात्दै हुनुहुन्छ भने चिन्ता नगर्नुहोस्। दिमागमा राख्नुहोस् कि ओभर-जोडी उपयुक्त कनेक्टरहरू भन्दा बढि समयको 80०% द्वारा एक ठूलो मनपर्ने हो।
तपाईं एक पकेट जोडी एक पटक हरेक १ hands हातमा व्यवहार गरिनेछ।
तपाईले सँधै कम हातहरू राख्नु पर्छ। यदि तपाईंको हात उपयुक्त छ, तर फ्लश फ्लप गर्ने तपाईंको संभावना ०.8% मा पेग गरिएको छ।
दुई-जोडी फ्लप गर्दै
तपाईंसँग नन जोडा बनाइएको होल कार्डहरूबाट दुई-जोडी फ्लप गर्ने धेरै स्लिम मौका छ। यसले तपाईलाई २% अवसर मात्र दिनुपर्दछ।
यदि तपाईं फ्लपमा दुई जोडी स to्कलन गर्न व्यवस्थित गर्नुभयो भने, तपाईंलाई पूर्ण घर बनाउने १..7474% मौका दिइन्छ।
अर्को पूर्ण घर
तर यदि तपाईं तीन-प्रकारको प्रकारको फ्लप गर्न सफल हुनुभयो भने, अब तपाईंसँग नदीको किनारमा पूर्ण घर वा राम्रो पाउने getting 33.%% संभावना छ।
त्यसोभए तपाईंले रेन्डम कार्डहरूको साथ जोखिम उठाउनुभयो अंधा पट्टिहरू लिन र एके द्वारा बोलाइयो। अझै, अनियमित तल्लो कार्डहरूलाई यी उदाहरणहरूमा जीतको 35 35% मौका दिइन्छ।
टेक्सास होल्डम पोकर खेल्दा जेब ज्याकसँग सावधान हुनुहोस्। यी कार्डहरू हेर्नको लागि उत्तम हुन सक्छ, तर तपाईंको फ्लपमा उच्च कार्ड पाउने सम्भावनाहरू केवल %२% मात्र हुन्। यो खेल बाँच्न को आधा मौका मा अनुवाद।
पोकर खेलाडी भएको नाताले तपाईले टेबुलमा नहुनु पर्ने कुरामा पनि ध्यान दिनु पर्छ।
नहुनुले तपाईका कार्य र शर्त सम्बन्धी निर्णयहरूमा सूचित निर्णय लिन मद्दत पुर्‍याउँछ।
तालिकामा समस्याहरूको समझले तपाईंलाई अझ राम्रो स्थितिमा राख्नेछ।